Gịnị ka Baịbụl kwuru gbasara ịlụ karịa otu nwaanyị? | EKPERE NA OZI
Gịnị ka Baịbụl kwuru gbasara ịlụ karịa otu nwaanyị?
Otu n'ime usoro ọdịnala dị iche iche n'emume alụmdi na nwunye gụnyere: "Alụmdi na nwunye bụ ihe Chineke hiwere," maka ịmụ ụmụ, obi a theụrị nke ndị metụtara ya, na ime ka ntọala maka ọha mmadụ nwere ahụ ike. Ajuju banyere otu ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị ịdị dị na mbụ nke uche ndị mmadụ.
Ọ bụ ezie na taa n’ọtụtụ ọdịnala ọdịda anyanwụ, ọtụtụ mmadụ nabatara na alụm di na nwunye bụ mmekọrịta, n’ime ọtụtụ narị afọ gara aga, ọtụtụ mmadụ amalitela alụlụ ịlụ karịa otu nwanyị, nke nwoke na-alụ karịa otu nwanyị, ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere nwanyị nwere ọtụtụ di. Ọbụna n'Agba Ochie, ụfọdụ ndị nna ochie na ndị ndu nwere ọtụtụ nwunye.
Ma, o nweghị ebe Baịbụl kwuru na ndị lụrụ ihe karịrị otu nwaanyị na-eme nke ọma ma ọ bụ na ha kwesịrị. Ka Baịbụl na-egosikwu na ọ bụ di na nwunye, na-ekwukwa okwu banyere ya, otú ahụ ka a na-enwekwu nsogbu nke ịlụ ihe karịrị otu nwanyị.
Dị ka akara ngosi nke mmekọrịta dị n’etiti Kraịst na nwunye ya, bụ Churchka, alụm di na nwunye egosiri dị ka ihe dị nsọ ma zubekwa ime ka mmadụ abụọ bịaruo nso na Kraịst, ọ bụghị nkewa n’etiti ọtụtụ di na nwunye.
Gịnị bụ ịlụ karịa otu nwanyị?
Mgbe nwoke lụrụ ọtụtụ nwunye, ma ọ bụ mgbe ụfọdụ, mgbe nwanyị nwere ọtụtụ di, onye ahụ na-alụ karịa otu nwanyị. Enwere ọtụtụ ihe kpatara mmadụ ga-eji chọọ ịlụ karịa otu nwanyị, gụnyere agụụ ihe ọjọọ, ọchịchọ ịmụba ụmụ, ma ọ bụ nkwenye na ha nwere iwu Chineke ime otú ahụ. N’agba ochie, ọtụtụ ụmụ nwoke a ma ama na ndị ọnụ na-eru n’okwu nwere ọtụtụ nwunye na ndị iko nwanyị.
Di na nwunye mbụ Chineke nyere n'iwu bụ n'etiti Adam na Iv. Adam toro otu abụ o mere mgbe ọ hụrụ Iv: “Nke a ga-abụ ọkpụkpụ nke si n'ọkpụkpụ m na anụ ahụ́ nke si n'anụ ahụ́ m; A ga-akp] ya nwany,, n'ihi na eweputara ya site na nwoke ”(Jenesis 2:23). Abụ a na-ekwu maka ịhụnanya, mmezu, na uche Chineke.
N’ụzọ dị iche na nke a, di ọzọ na-esote uri bụ nwa nke Ken aha ya bụ Lemek, onye mbụ buru ibu. Ọ lụrụ ụmụ nwaanyị abụọ, aha ya bụ Eda na Zila. Ugwu ya adịghị ụtọ, mana banyere igbu ọchụ na ịbọ ọbọ: “Ada na Zillah, geenụ ntị n’olu m; Ndikom Lamech, nuru, n :kwu okwu: Mu onwem b killeduru nwoke imejọ m, Nwa-okorọbia n fortib meum. Ọ bụrụ na ịbọ ọbọ Ken dị okpukpu asaa, mgbe ahụ, nke Lemek dị iri asaa na asaa ”(Jenesis 4: 23-24). Lamech bụ nwoke na-eme ihe ike nke nna nna ya na-eme ihe ike ma na-eme ihe na-akpali ya. Ọ bụ nwoke mbụ lụrụ karịa otu nwaanyị.
N'ịga n'ihu, ọtụtụ ndị ikom weere na ha bụ ndị ezi omume na-alụkwa ndị nwunye ọzọ. Agbanyeghị, mkpebi a nwere nsonaazụ na-eto eto na narị afọ gara aga.
Nke gara aga Post Gara aga post:4 ekpere di obula kwesiri ikpe ekpere banyere nwunye ya
Next Post → Post ozo:Oziọma Taa bụ October 15, 2020 na okwu Pope Francis